Iyo Outlook tsamba maneja inovandudzwa ichiwedzera mitsva mabasa | IPhone nhau
Mumwe wevatengi veemail isu vatinayo muIOS, uye zvinosuwisa kuti havasi vanhu vazhinji vanoshandisa ndiOptlook, email mutengi inoramba ichienderera inoitwa nyowani kuwedzera mabasa matsva pamusoro pekuvandudza avo vatovepo. Microsoft yakangovandudza tsamba yayo yemutengi yeIOS inowedzera matsva ekutsvaga-centric.
Tsvaga maemail, yagara iri hope dzehusiku kune chero mushandisi, sezvo tichigara tichiwanzosangana nenhamba huru yemhedzisiro isingatifarire. Kugadzirisa izvi, Microsoft iri kushanda mukutsvaga mhinduro inodiwa nemunhu wese uye zvakare inobatsira pane iriko yazvino. Uye ikozvino, iye ari munzira chaiyo.
Chiitiko cheOptlook 2.63.0 Iyo inotipa iyo yayo yega tabo yekuita tsvagurudzo uye yekufambisa bar iyo yatinogona kukurumidza kusefa mhando yemhedzisiro yatiri kutsvaga. Iyo yekutsvaga icon ikozvino pazasi pechishandiso uye ukangodzvanya pairi tinogona kuita chero mhando yekutsvaga, kwete muaccount yedu chete, asiwo mune mamwe ese masevhisi atakabatana nechishandiso, senge khalendari, vanofambidzana, kugadzwa ...
Kubva mubhokisi rekutsvaga, tinogona kuita kutsvaga mumaakaundi edu ese eemail, kutsvaga macontact, zvinonamirwa ... kubva panzvimbo imwechete, pasina kuenda kuaccount neaccount, chimwe chinhu chinomhanyisa basa rakakura rekutsvaga. Kutenda kune mafirita matsva, tinokwanisa kudzikisira tsvagurudzo, kuitira kuti mhedzisiro yeakaunzi chete, mafaira akasungirirwa anoratidzwa ...
Idzi shanduko zvinongoerekana zvasvika kune vese vashandisi, saka kana iwe ukango gadziridza iko kunyorera, usaore moyo. Kana iwe ukaona kuti pane chero chikamu chekushandisa icho chinogona kuvandudzwa, kana iwe uchida kupa zano, kubva kuchishandiswa pachako unogona kuzviita zvakananga, chimwe chinhu icho vazhinji vashandisi vanokoshesa uye icho Microsoft inogara ichifunga nezvacho. Apple inogona kuita zvakafanana nguva nenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo Outlook tsamba maneja inovandudzwa ichiwedzera mitsva mabasa
Iyo AirPower uye nyowani AirPods bhokisi vaigona kuona mwenje munaKurume